Xiddigaha ugu dhakhliga badan 2016-17….(Ronaldo oo ka sara maray Messi)….Yaa hogaaminaya dhanka Tababarayaasha???? – Gool FM
Xiddigaha ugu dhakhliga badan 2016-17….(Ronaldo oo ka sara maray Messi)….Yaa hogaaminaya dhanka Tababarayaasha????
(Europe) 28 Mar 2017. Cristiano Ronaldo ayaa noqday laacibka ugu dakhliga badan 2016-17 iyadoo lagu sheegay lacagihiisa 87.5 milyan oo euro, waa markii ugu horreysay uu ka dakhli bato Lionel Messi kaa oo helay 76.5-milyan oo bound waa sida ay sheegeyso France Football.
Laacibka reer Portugal ee ku guuleystay sanadkaan Ballon d’Or iyo laacibka ugu fiican FIFA ayaa sanadkaan ka sara maray Messi cadada 19-aad ee mushaarka xiddigaha ay sanad kasta soo saarto jariiradda reer France.
Dakhliga ay jiriiradda xisaabineyso ayaa waxay isugu jiraan mushaaraadka guud, gunnooyinka iyo xayaysiimaha ee kal ciyaareedka 2016-17.
Dhanka tababarayaasha waxaa hogaaminaya Jose Mourinho oo dakhligiisa lagu sheegay 28 milyan oo euro.
Haddaba halkan ka aqriso 5-ta sare ee ciyaartoyda ugu dakhliga badan kubbada cagta:
5-ta tababare ee ugu dakhliga badan:
Dab ka kacay Hongkou Stadium...(Ma cid wax ku noqataa jirta?)....+SAWIRRO
DUKHUL DAAKHUL: Jeenyo ma iyadaa ka talisa horyaalka Soomaaliya? (Warbixin)